Bhalisela iPodcast - ama-Beroean Pickets - Ukubuyekezwa kwe-Webhu.org
Ngokubhalisela le podcast, uzokwamukela ngokuzenzakalelayo iziqephu zakamuva ezilandiwe kukhompyuter yakho noma kudivayisi ephathekayo. Khetha indlela yokubhalisela engezansi elingana kangcono nendlela yakho yokuphila.
Amaphakethe we-Beroean - Ukubuyekezwa kweWebhu.org
Apple PodcastsI-Google PodcastsAndroidnge-imeyiliRSS
Noma bhalisa ngohlelo lwakho lokusebenza olithandayo ngokusebenzisa ikheli elingezansi
I-iOS (i-iPhone, i-iPad, ne-iPod)
Ukuze ubhalise, khetha inkinobho ethi "Bhalisa ku-iTunes" ngenhla.
I-Android ne-Amazon Fire
Ukuze ubhalise, khetha inkinobho ethi "Bhalisa ku-Android" ngenhla.
Uhlelo lwakho lokusebenza oluthandayo
Kopisha ikheli elitholakala ebhokisini elingenhla bese unamathisela kuhlelo lwakho lwe-podcast oluthandayo noma umfundi wezindaba.
Beka i-bookmark kule podcast
Ukubekisa leli sayithi le-podcast, cindezela izinkinombo "Ctrl" no- "D" kukhibhodi yakho ye-Windows, noma i- “Command” + “D” ye-Mac.